Socapalm muComeroon ndiyo inonyanya kubhadhara Africa Socfin subsidiary pa 1er 2019 quarter - TELES RELAY
HOME » upfumi Socapalm muCameroon ndiyo inonyanya kubhadhara Africa Socfin subsidiary pa 1er 2019 quarter
(Kuisa muCameroon) - The Luxembourg Rubber Financial Company (Socfin) ichangobva kubudisa zvikamu zvayo pakupera kwekota yekutanga 2019. Pamusoro pekuongororwa kwemashoko, zvinoratidzika kuti rutivi rwaro, iyo Cameroon Cameroon Company yePalm Groves (Socapalm), ndiyo inobatsira zvikuru muAfrica panguva inenge ichidzokororwa.
Mukunyatsotsanangurwa, Socapalm yakatumira mari yakawanda ye8 898 mamiriyoni € (inenge 6 mabhiriyoni FCFA). Munzvimbo yechipiri, tinowana hurumende yeNigerian Okomu ine net net profit ye ​​4 133 mamiriyoni (anenge ane 3 mabhiriyoni FCFA). The Cameroon anouya chepamusoro rechitatu pamwe foresitiri uye okurima chikamu rinonzi African Society of Cameroon (SAFACAM), izvo Hamubvumirwi mambure purofiti € 1 090 miriyoni (anenge mamiriyoni 713 FCFA). Subsidiaries shona SOGB CSC uye kutevera pamwe 926 000 € (anenge mamiriyoni 606 FCFA) uye 841 000 € (mamiriyoni 550,8 FCFA). In West Africa, iyo subsidiaries dziri dhefisiti Socfin: -2 mamiriyoni 258 € (kunaka mufananidzo kusvika mabhiriyoni 1,5 FCFA) nokuti Lạc & CBC (Liberia) uye -2 mamiriyoni 204 € (kunaka mufananidzo mabhiriyoni 1,4 FCFA ) yeSAC (Sierra Leone).
The bullish chokupika ari Cameroon chikamu Socapalm anoti Socfin, anogona chokuita tikarega kugadzirwa uye kumhanyisa kuti kudyiwa kuIndia uye China zvikurukuru zvakakonzera tikarega inventories. Izvi zvakabvumira kuwedzera kwakakura kwezvinhu zvakasvika ku570 USD / ton pakati pemwedzi waFebruary. Panguva imwecheteyo, kuwedzera kwemafuta emafuta kwakakonzera kuwedzera kwemichindwe mafuta kushandiswa kwebiodiesel muIndonesia kunyanya.
Zvisinei, pasinei izvi nhau inokurudzira, Socfin rinoratidza kunaka pfungwa inodzorwa mumisika uye mutengo mafuta emichindwe vakaenda kundotenga pedyo 500 USD / tani mukupera April. Izvi hazvirevi zvakanaka pamutsara unotevera.
Samuel Eto'o anotarisa anokosha kune anopfuura mamiriyoni emadhora pano iri chirevo chake - CAMEROON MAGAZINE